Kedu agba na-ekwu maka ụdị gị | Martech Zone
Ihe agba na-ekwu maka ụdị gị
Fraịdee, June 29, 2012 Sọnde, Septemba 8, 2013 Douglas Karr
Agba bụ mgbe ọ bụla isiokwu na-adọrọ mmasị ma bụrụ ụfọdụ n'ime ihe ọmụma kachasị ewu ewu anyị kesara na blog. Nhọrọ agba site na okike, logo agba nke weebụ, na ma ọ bụ na ọ bụghị agba mmetụta ahịa ha niile abụrụ ihe omuma anyị gbara ọsọ. Ihe omuma ihe omuma a site na Marketo na kọlụm ise na-enye echiche dị iche… ihe agba na-ekwu banyere gị ika.
Marketo: A na-akọwa ụdị ndị a kacha mara amara n'ụwa site na agba ha. Chee echiche banyere arches ọla edo nke McDonald, aha ya bụ Jet Blue, na okwu okwu UPS, Kedu ihe Brown nwere ike imere gị? Companieslọ ọrụ ndị a, na ọtụtụ ndị ọzọ, na - eji agba agba na akara ngosi ha, weebụsaịtị ha na ngwa ahịa ha rịọ ndị ahịa.
Tags: ika agbaika agbaagbaagbaagbaagbaagba logologo agba
Balihoo: Ahịa akpaaka mpaghara
Smartphone na Kupọns Na-arụ Ọrụ
Jun 30, 2012 na 2: 16 PM
Daalụ maka ịkekọrịta Infographic anyị! Enwere ekele dị ukwuu.
Jenụwarị 28, 2013 na 3:03 PM
Nnukwu Infographic, Doug… 2 isi mkpịsị aka!